Golaha amaanka oo liiska cunaqabataynta ka saaray xubno horey uga mid ahaa Daalibaan – SBC
Golaha amaanka oo liiska cunaqabataynta ka saaray xubno horey uga mid ahaa Daalibaan
New York:- Golaha amaanka ayaa ka saaray liska cunaqabtaynta caalamiga afar iyo toban qof oo horey uga tirsanaan jirey xarakada Daalibaan kadib dalab uga yimid xukuumadda Afghanistan.
Magacyada shakhsiyaatka laga saaray liiska ayaa waxaa kamid ah afar qof oo Xubno ka ah golaha sare ee Nabadda kaasi oo ay dhistay xukuumadda Afghanistan bishii September ee la soo dhaafay si wadada loogu xaaro wadahadal lala galo xarakada Daalibaan.
Afarta qof ayaa waxaa kamid ah Arsalaan Raxmaani oo horey u ahaa kuxigeenkii wasiirkii tacliinta sare xukuumaddii Daalibaan, Xabiibullah Fawsi oo ahaa dublumaasi hore oo wakiil uga ahaa Daalibaan dalka Sucuudiga , Sayidulraxmaan Xaqaani oo ahaa kuxigeenka wasiirka wasiirka warshadaha iyo Faakir Maxed.
Golaha amaanka ayaa sheegay in talaabadan ay fariin u tahay taageerada dadaalka nabadda ee ay wado xukuumadda Afghanistan ee loola dan leeyahay sidii Daalibaan ay uga qeyb gali lahayd wadahadalada siayasadeed.
Qaraarka cunaqabtaynta ayaa la soo rogay sanadkii 1999 xilligaas oo ay Daalibaan gacanta ku haysay Afghanistan, kadibna waxaa la sii adkeeyey wixii ka dambeeyey dhacdooyinkii 11 September 2001.
Liiska ayaa hadda waxaa ku soo haray boqol saddex iyo labaatan magac oo daalibaaniyiin ah kuwaasi oo lagu soo rogay in aysan dalka dibadda uga bixi Karin islamarkaana hantidooda la joojiyey.
Xukuumadda Afghanistan ayaa soo gudbisay liis ay ku qoran yihiin magacyada 50 qof oo ay xukuumaddu sheegtay in ay markale dib ugu soo laabteen bulshadooda balse golaha amaanka ayaa ku gacan seeray sida ay sheegtay wakaaladda AP.
Xafiiska madaxweynaha Afghanistan Xamiid Karasaay ayaa ku baaqay dhisitaanka gole taasi oo ah talaabo wax ku ool ah dhanka nabadda, balse xarakada Daalibaan ayaanan soo dhoweyn fikirkaas, waxayna sheegtay in ay waajib tahay ka bixitaanka dhamaan ciidanka shisheeyey dalka Afghanistan marka ugu horeysa.